ROCK MAVESATRA :: Hifandona etsy amin’ny Dôme RTA ry Iniah sy Allkiniah • AoRaha
ROCK MAVESATRA Hifandona etsy amin’ny Dôme RTA ry Iniah sy Allkiniah
Mateti-piavy tato ho ato ny fampisehoana ho an’ny mozika Rock. Taorian’ireo hetsika maromaro teto Iarivo, dia raikitra indray fa hisy ny fampisehoana miavaka hotanterahina etsy amin’ny Dôme RTA Ankorondrano, ny alahady 14 oktobra ho avy izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro.
Tarika roa anisan’ireo mavitrika amin’ny fitrandrahana ny gadona mavesatra kanefa tsy tazana an-tsehatra firy no hifarimbona hanafana ny sehatra. An-daniny, ry Iniah hitondra ireo sanganasa nahafantarana ny tarika tany amin’ny faramparan’ny taona 90. Hivazo ireo hirany malaza amin’izao fotoana izao kosa ry Allkiniah. Hampiavaka ny hetsika ny fanolorana ireo mpankafy iray vazo rock amin’ny endrika masiatsiaka nefa mampihetsi-po, ka Sasamaso no ho hitan’ny mpijery amin’ireo hira ampolony nahafantarana azy. Hanohy ny fampisehoana, aorian’izay ny tarika Allkiniah. Ankoatra an-dRatolojanahary Michael misahana ny lafiny fihirana, dia hiray sehatra aminy amin’io seho io ireo mpitendry enina mirahalahy manana ny talentany ao amin’ny tarika, toa an-dry Joss Randriah, Johary Ratsimarizay… Hofohazin’izy ireo, ary hiangaliany amin’ny endrika hafa ireo hira noforonin’ny tarika ary santionany amin’izany ny «Fitia mandrakizay»…
Ao anatin’ny fizarana fahatelo kosa no hiakatra eny an-tsehatra ny tarika Iniah ary hiavaka amin’ny mahazatra ny tolotra homeny ny mpankafy. Efatra miarahalahy hatrany izy ireo no hanambatra angovo mandritra izany, ahitana an’i Bob, Eric, Rindraniaina ary Teddy. « Mikaroka zava-baovao hoentiny hanomezana fahafaham-po ny mpijery hatrany izahay. Vokatra metaly tena mivaingana kokoa no hatolotra », araka ny fanamarihan’i Rindra. Zava-dehibe eo amin’ny tontolon’ny mozika rock ny zava-maneno sy ny jiro ary ny hazavana ka ny Ivenco, izay mpikarakara no hiantsoroka izany. Noraisin’izy ireo an-tanana ihany koa ny teo amin’ny lafiny ravaka.
JMJ ANY MAHAJANGA :: Ampirisihana hanome vahana ny fitiava-namana ireo tanora
FISOROHANA NY LOZAM-PIFAMOIVOIZANA :: Miomana sahady amin’ny fiverenan’ ireo nanao ny JMJ ny ATT